ချင်းဝတ်စုံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ၀တ်ဆင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ မှတ်မှတ်ရရ တိုက်ဆိုင်မှု အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့တဲ့ သူဇာဝင့်လွင် – Cele Top Stars
ချင်းဝတ်စုံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ၀တ်ဆင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ မှတ်မှတ်ရရ တိုက်ဆိုင်မှု အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့တဲ့ သူဇာဝင့်လွင်
May 15, 2021 By admin2News
မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အလှမယ်သူဇာဝင့်လွင် က Miss Universe Myanmar 2020 ရဲ့ Winner ဆုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိထားသူ ဖြစ်ပြီးသရုပ်ဆောင်၊အဆိုတော် မေရဲ့တစ်ဦးတည်းသော ညီမလေး လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ (၆၉)ကြိမ်မြောက် Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးကို Miami မှာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။နွေဦးေ တ်ာလှန်ရေးမှာ ဆိုရင် လည်း ပြည်သူတွေဘက် ကနေ အစွမ်းကုန်ပါဝင် လှုပ်ရှားခဲ့ တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိအ ချိန်ထိလည်း ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားတည်း ရပ်တည်နေတုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ကတော့ Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ National Costume competition မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုအလှမယ်သူဇာဝင့်လွင်ကချင်းဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပြီး စင်မြင့်ထက်မှာ အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကို ဖော်ဆောင်ရည်ညွှန်းချင်တဲ့ပစ်တိုင်းထောင် ဝတ်စုံလေး မရောက်ရှိလာပေမယ့်လည်းအမေရိကမှာရှိတဲ့ချင်းလူမျိုးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့အဆင်ပြေခဲ့တာကို အခုလိုရေးသားဖော်ပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“Miss Universe Myanmar ပွဲမှာ ချင်းပြည်နယ် ရဲ့ ဟားခါးမြို့ကို ကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအခုတစ်ခါ Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ National Costume competition မှာလည်း ချင်းဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုခွင့်ရတာခဲ့တာတကယ်ကိုမှတ်မှတ်ရရဖြစ်စေတဲ့တိုက်ဆိုင်မှု တစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်မရဲ့နဂိုစီစဉ်ထားတဲ့ National Costume ဟာ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အချိန်မှီရောက်မလာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကံကောင်း ထောက်မစွာနဲ့ပဲ အမေရိကမှာရှိတဲ့ ချင်းလူမျိုးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ ချင်းဝတ် စုံလှလှလေးကို ဝတ်ဆင်ပြီး အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်နိုင် ခဲ့ပါတယ်။
It is suchabeautiful coincidence that I represented Hakha (Capital of Chin State) in Miss Universe Myanmar and now I had to wear the Chin costume again and represented Myanmar on Miss Universe stage. My official NC couldn’t make it here in time for some reasons. But with the help of Chin community here, I was able to get the Chin attire and did my best in NatCos competition. Massive thanks to beloved Chin peopel here and Chin Taung Tan (Atlanta, Georgia) for helping me out and letting me be theirs once again.”ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။မြန် မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ သူမဝတ် ဆင်မယ့် ဝတ်စုံတွေပါတဲ့အိတ်တွေ ပြန်မရရှိသေးတာရယ်စတဲ့အခက်အခဲတွေမျိုးစုံကြားထဲက စွန့်စားပြီးသွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေထပ်ပြီး အားပေးလိုက်ကြပါဦးနော်…..
ဒီနေ့ မနက် ( ၁၀း၄၅) မှာပြည်သူချစ်သော ဝါရင့်ဟာသလူရွှင်တော်ကြီး ဦးစိန်ရိုး ကွယ်လွန်သွားခဲ့
စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနေတဲ့ မြောက်ဥက္ကာ (၂)ရပ်ကွက်မှ အဖိုးအဖွားပြည်သူတွေကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နေဒွေး